- စိတ်အသိထဲကို တည့်တည့်မတ်မတ်၊ ထဲထဲဝင်ဝင်၊ စူးစူးနစ်နစ်၊ ထိထိရောက်ရောက်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ရိုက်ထိမှန်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုခုကို ရရှိသွားတဲ့သူဟာ ဗုန်းခနဲ ပြုတ်ကျပြိုလဲပြီး လူးလှိမ့်နေအောင် ခံစားသွားရတဲ့ စိတ်အဆင့်။
- စကားကို ပြေပြေပြစ်ပြစ် ပြောတတ်ခြင်း၊ တစ်ဘက်သား နားဝင်အောင် ပြောတတ်ခြင်းတို့ကြောင့် လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ တစ်ခါတလေ အသုံးဝင်တဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။ ဒေါသထွက်နေတဲ့သူ၊ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို မိမိဘက်က ချိုချိုသာသာနဲ့ စကားကို ပြေပြေပြစ်ပြစ် နားဝင်အောင် ပြောနိုင်ရင် တစ်ဘက်လူရဲ့ ဒေါသစိတ်ကို လျော့ကျသွားစေတယ်။ တစ်ခါတလေ စိတ်ချင်းဆက်ဆံရေးမှာ အသုံးတည့်တဲ့စိတ်။
- တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီက တစ်ဆင့်ကြားလာတဲ့ ကောလာဟလစကားကို မိမိကိုယ်တိုင် ကြားခဲ့သလို၊ မြင်ခဲ့သလို ပုံစံဖမ်းပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောရဲတဲ့သူရဲ့ စိတ်သဘောထား။
- စိတ်ကို အလုပ်လုပ်ခိုင်းထားတာမျိုး မရှိလို့ဖြစ်တာ။ စိတ်ရဲ့သဘာဝက ခိုင်းထားတဲ့အလုပ်မရှိရင် သက်သာတဲ့နေရာမှာနေပြီး လွင့်နေတတ်တဲ့ စိတ်အနေအထား။
- သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး မိမိစိတ်ကို စောင့်ကြည့်သိမှတ်တဲ့ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းဟာ စိတ်ရဲ့သဘာဝကို အမြန်ဆုံး သိနိုင်တဲ့နည်းပဲဆိုတာ သိသွားတဲ့ အချိန်ကစပြီး သိတဲ့အတိုင်း လေ့ကျင့်နေတဲ့စိတ်။
- စိတ်ကိုမမြင်ရပေမယ့် စိတ်ရဲ့နှိပ်စက်မှုက ဘာ့ကြောင့်ပြင်းထန်နေရတာလဲ? မမြင်ရတဲ့စိတ်ရဲ့ အနိုင်ကျင့် လွှမ်းမိုးမှုတွေက အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် အဆင့်ထိ ရောက်သွားစေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? စိတ်ထဲကို စိတ်တစ်ခုဝင်လာတိုင်း ၀င်လာတဲ့ စိတ်နောက်ကို မျောပါသွားပြီး ခံစားမှုအမျိုးမျိုး ဖြစ်နေရတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ စိတ်ဆိုတာ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ စိတ်ထဲကို ရောက်ရောက်လာတာလဲ? မလုပ်ချင်ပေမယ့် လုပ်ဖြစ်သွားတာ ဘယ်သူက လှုံ့ဆော်တိုက် တွန်းနေတာလဲ? စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာရှာဖွေနေတာ ကြာပြီ။ သူ့အကြောင်း သိဖို့လိုလာပြီ။ သူ့အကြောင်းသိဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
စိတ်ရဲ့ သဘောကို သိကြည့်ခြင်း
စေတသိက်ရဲ့ သဘောကို သိကြည့်ခြင်း